CONFIGURING ROUTER ကို ASUS က RT ကို-N11P, RT ကို-N12, RT ကို-N15U - ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ကို - 2019
Configuring router ကို ASUS က RT ကို-N11P, RT ကို-N12, RT ကို-N15U
ငါအများကြီးလက်လှမ်းသည်စျေးဆိုင် (နှင့်အများအပြားပုဂ္ဂလိကအထူးကု) သို့သာမန် Router က၏ setting ကိုအပေါ်စျေးနှုန်း၎င်း tag ကြောင်းငါနှင့်အတူပါသဘောတူကြလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်သင်၏ ISP ကွန်နက်ရှင် settings ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့် Router ကသို့သူတို့ကိုငါဆောင် ခဲ့. (ဒီပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်): အထူးသဖြင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်တပြင်လုံးကို setup ကိုပု banal လျှော့ချကြောင့်။
သင်တစ်ဦးသည် router configuration ကိုများအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပိုက်ဆံပေးချေခင်မှာငါ (ကကိုယ့်ကိုကိုယ် configure လုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်အကြံပြုစကားမစပ်ငါတစ်ချိန်ကသူ၏ပထမဆုံး router ကိုထူထောင်အတူတူအကြံအစည်နှင့် ... ) ။ တစ်ဦး guinea သကဲ့သို့ငါ (လမ်းဖြင့်, ထို router များမော်ဒယ် ASUS က RT ကို-N11P, RT ကို-N12, RT ကို-N15U တူညီသောလမ်းဝင် setting) က router ကို ASUS က RT ကို-N12 ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်အပေါငျးတို့သခြေလှမ်းများစဉ်းစားပါ။
1. ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ကို Router ကိုချိတ်ဆက်ပါ
အားလုံးပေးသူ (အနည်းဆုံး, ထိုငါ့အားအမှတ်မထင် ... ) ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာအပေါ်တာဝန်ခံကအင်တာနက် setting များကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကဒ်သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာ "လိမ် pair တစုံ" (ကွန်ယက်ကို cable ကို) မှတဆင့်ချိတ်ဆက်။ လျော့နည်းလေ့လည်း PC ရဲ့ကွန်ယက်ကိုကဒ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ modem, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အခုတော့အဲဒါကို cable ကိုပံ့ပိုးပေးသူနှင့်ကွန်ပျူတာအကြားကြားခံခဲ့တဲ့ router ကိုတည်ဆောက်ရန်ဤတိုက်နယ်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်:
ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကဒ်ပေါ်တွင် cable ကိုပံ့ပိုးပေးဆက်ဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ (အပြာ input ကိုစခရင်ပုံကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကို router ကချိတ်ဆက်ပါ။
ယင်းနောက်အဝါရောင်ထွက်ပေါက်သည် router (ကွန်ယက်ကို cable ကိုများသောအားဖြင့်ကြွလာ) နဲ့ (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော cable ကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်သော) ကိုကွန်ပျူတာ၏ကွန်ယက်ကိုကဒ်ချိတ်ဆက်ပါ။ အားလုံး၌, Router က LAN output ကို၏4။ အောက်ပါပုံရိပ်ကြည့်ရှုပါ။
ကွန်ယက် 220V ဖို့ router ကိုချိတ်ဆက်ပါ;
ထို့နောက် router ကိုဖွင့်။ စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အယ်လ်အီးဒီ blinking စတင်ခဲ့ပါလျှင် - ကအဆင်ပြေရဲ့;
device ကိုသစ်ကိုမပါရှိလျှင်က settings ကိုပြန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, 15-20 စက္ကန့်များအတွက်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု button ကိုနှိမ့်ချကိုင်ထားပါ။
router ASUS က RT ကို-N12 (နောက်ဘက်မြင်ကွင်း) ။
Router ကို Setting ကိုမှ 2. ဝင်မည်
Router ကို၏ပထမဦးဆုံး setting ကို Router ကိုမှ LAN cable ကိုတို့ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံး (သို့မဟုတ် Laptop ကို), ကနေဖျော်ဖြေနေသည်။ ရဲ့ခြေလှမ်းတို့ကအပေါငျးတို့သအဆင့်ခြေလှမ်းသွားကြကုန်အံ့။
1) OS ကို Adjust
သင် router ကို setting များကိုသှားဖို့ကွိုးစားမီ, သငျသညျကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု၏ဂုဏ်သတ္တိများစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကို Windows Control Panel ကိုသွားပါ, ထို့နောက်နောက်ပိုင်းတွင်လမ်းရှောက်သွား: ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက် ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မျှဝေခြင်းရေးစင်တာ Change adapter settings ကို (Windows 7, 8 အဘို့သက်ဆိုင်ရာ) ။
ဤတွင်သင်ရရှိနိုင်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုနဲ့ window ကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ သငျသညျ (က LAN cable ကိုသုံးနိုင်သည်။ အမှန်မှာကြောင်း, ဥပမာ, များစွာသောမှတ်စုစာအုပ်အပေါ်နှင့် Wi-Fi adapter နဲ့သာမန်ကွန်ယက်ကိုကဒ်ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့အများအပြား icon တွေကို adapter ရပါလိမ့်မယ်) ကို Ethernet ချိတ်ဆက်ဂုဏ်သတ္တိများသို့သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင် "Internet Protocol Version 4" ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုသွားနှင့်ဆန့်ကျင်အချက်များပေါ်တွင်လျှောထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးနောက်: "အလိုအလျှောက်အနေနဲ့ IP address ကိုရယူပါ", "အလိုအလျှောက်၏ DNS-server ကိုလိပ်စာရယူပါ" (အောက်ပါပုံရိပ်ကြည့်ပါ။ ) ။
စကားမစပ်အိုင်ကွန်တောက်ပပြီးအနီရောင်ကြက်ခြေခတ်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဤသည်ကို router တစ်ခုကွန်နက်ရှင်အကြံပြုထားသည်။
သင်ကကွန်နက်ရှင်ပေါ်အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်ရှိပါက - ကသင်တစ်ဦးကို PC device ကိုမချိတ်ဆက်ခဲ့ပါဆိုလိုသည်။
အဆိုပါ adapter အိုင်ကွန်မီးခိုးရောင် (မျှအရောင်) သည်ဆိုပါက - ဒါ adapter ပိတ်ထားသည်ကို (ကိုယ့်ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကူးအပြောင်း) သို့မဟုတ်ပါကစနစ်အတွက်ယာဉ်မောင်းများရှိသည်ပါဘူးဖြစ်စေ။
2) Setup ကိုထည့်သွင်းခြင်း
router သည် configuration ကို ASUS ကသို့တိုက်ရိုက်ဝင်မဆို browser ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လိပ်စာရိုက်ထည့်ရန်:
username နှင့် password နေသောခေါင်းစဉ်:
မှန်ကန်စွာပြုသောအမှုလျှင် router ကိုသစ်ကိုမဖြစ်နှင့်ပြီးသားသူတစ်ဦးဦးဖမ်းယူနားဆင်ခဲ့ကြပါလျှင်အမှန်စင်စစ်, သငျသညျ, လမျးဖွငျ့ (ထို router ကို၏ setting ရလိမ့်မယ် - ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ (အနောက်ဘက် panel ကိုအပေါ်တစ်ဦးကို reset button ကိုရှိပါတယ်) သင် reset ချင်သောစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်, ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ခဲ့သည်။ re-ရိုက်ထည့်ပါ) ။
သင် router ကို setting များကိုမဝင်နိုင်နိုင်လျှင် -
3. (ဥပမာ PPPOE များအတွက်) အင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ Router ကို ASUS က RT ကို-N12 Configuring
စာမကျြနှာ "အွန်လိုင်း - Connection ကို" ကိုဖွင့် (သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အင်တာနက်တူတစ်ခုခုကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်, အခြို့ firmware ကို၏အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းရှိစေခြင်းငှါယူဆ - အဓိက) ။
ဒီနေရာတွင်အင်တာနက်သင်၏ ISP နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံ settings ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စကားမစပ်, သငျသညျ (: သင် connect ရာမှတဆင့်ပရိုတိုကော, access များအတွက် login နဲ့ password ကိုကပံ့ပိုးပေး access ကိုကမ်းလှမ်းရာများအတွက် MAC address ကိုသတ်မှတ်ဖြစ်နိုင်မယ့်သူကသင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်) နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူကျုံ့ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
တကယ်တော့ပြီးတော့အဲဒီ settings တွေကိုဤစာမျက်နှာတွင်ထဲသို့ဝင်ကြသည်:
WAN ရိုက်ထည့်ပါ - ဆက်သွယ်မှု: PPPoE ကို select (သို့မဟုတ်သင်စာချုပ်၌အသုံးအများဆုံး PPPoE လမ်း, ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားများ၏ရွေးချယ်မှုသည်နောက်ထပ်မှီခို setting များကိုရှိသည်သောတဦးတည်း .. );
(user name ကိုအထိ) Next ကိုဘာမှပြောင်းလဲအောက်ပါပုံရိပ်မှာကဲ့သို့တူညီသောလမ်းမချန်မထားနိုငျသညျ
user name: (စာချုပ်ထဲမှာစာရင်း) ကိုအင်တာနက် access ရန်သင့်ရဲ့ login ဝင်;
MAC address ကို: အချို့သော ISP များအားအမည်မသိရဲ့ MAC addresses များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဆောင်သွားကြ၏။ သငျသညျ (သို့မဟုတ်ပိုကောင်းမယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်) ကပံ့ပိုးပေးကြလျှင်, ရိုးရိုး (ယခင်ကကွန်ယက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့သောတဆင့်) ကွန်ရက်ကဒ်၏ MAC address ကို clone ။ ဒီအပေါ်ကိုပိုမိုများအတွက်:
settings ကိုအောင်ပြီးနောက် router ကိုကယ်တင်နှင့်ပြန်လည်စတင်ရန်မမေ့မလြော့ပါ။ မှန်ကန်စွာပြုသောအမှုရှိလျှင်, အင်တာနက်ကိုသငျသညျဝင်ငွေရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကိုသာရှိနေရင် LAN port များထဲကတစ်ခုမှ cable ကိုအားဖြင့် router ကိုချိတ်ဆက် PC ပေါ်မှာ။
4. က Wi-Fi ကိုတက်ချိန်ညှိခြင်း
အင်တာနက် access ကိုရဖို့ရန်အိမ် (ဖုန်း, လက်ပ်တော့, netbook, တက်ဘလက်) တွင်အမျိုးမျိုးသော devices များစေရန်, သငျသညျအစက Wi-Fi ကိုပြုပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအတော်လေးရိုးရှင်းစွာပြုမိသည်ကို router ၏ setting ထဲမှာ, tab ကို "ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် - ယေဘုယျအား" ကိုသွားပါ။
Next ကို, သင်အနည်းငယ် parameters တွေကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်:
SSID သို့ - သင့်ကွန်ယက်၏အမည်။ ဒါကြောင့်ဖွင့်နှင့်အသငျသညျရရှိနိုင်ကွန်ရက်များက Wi-Fi ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာသင်ကွန်ယက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ထားသောအခါ, ဥပမာ, ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်,
SSID သို့ Hide - ငါဖုံးကွယ်ဖို့မအကြံပြု;
encryption ကို WPA - AES enable;
Key ကို WPA - ဒီနေရာတွင် (ကမသတ်မှတ်ရသေးပါလျှင်, သင်၏အင်တာနက်အပေါငျးတို့သညျအိမျနီးခငျြးကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်) သင့်ကွန်ရက်ကဝင်ရောက်ဖို့စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
settings ကို Save နှင့် Router က reboot ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောဖုန်းသို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာအဖြစ်, Wi-Fi ကွန်ရက်မှဝင်ရောက်ခွင့် configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Router ထဲတွင်မှား input ကို setting များကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို PC ကဆက်သွယ်မှား: အချိန်ကိုအခုမှစနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေခံပြဿနာများကိုအများစုဟာ။ ဒါကအားလုံးပါပဲ။
ဗီဒီယို Watch: Wireless Bridge Mode on the ASUS Router (နိုဝင်ဘာလ 2019).